November 2012 – Ministry of Education in Puntland
Shir ku saabsan dejinta Siyaasada Tacliinta Sare oo ka socda Wasaarada Waxbarashada
Shirkaani looga hadlayo dajinta iyo sharci u samaynta tacliinta sare ee Puntland ayaa waxaa kasoo qayb gallay mus’uuliyiinta wasaarada waxbarashada oo uu ugu horeeyo wasiirka wasiir ku xigeen,iyo agaasimaha guud,waxaana […]
Hambalyo 21ka November maalinta macallinka Soomaaliyeed.
Aqoon la’aani waa iftiin la’aan,Waa aqal iyo ileys la’aane, ogaada ogaada walaalayaal ogaada, oo aada dugsiya. Macallinka ama baraha waxa kuu dhigaahi, waa aabbaha labaad ee ku howlan gacan qabashada […]
Wasaarada Waxbarashada puntland oo soo bandhigtay 30 gabdhood oo loo helay deeq waxbarasho jaamacadeed.
Wasaarada Waxbarashada Puntland ayaa manta soo bandhigay arday gabdho ah oo loo helay deeq waxbarasho Jaamacadeed. Ardaydan oo tiro ahaan gaarsiisan 30 arday gabdho ah ayaa waxaa kharashaadka deeqdan waxbarasho […]
November 12, 2012 / ESC meeting minutes
ESC meeting minutes for the month of August
ESC minutes-AUGUST Please follow and like us:
Waa Sidee Nolosha Ardayda Reer Puntland ee Deeqda Waxbarasho ka Helay Itoobiya? War-Saxaafadeed
Haween Macalimiin ah oo Tababar loogu qabtay Wasaarada Waxbarashada
GAALKACYO:Wasaaradda waxbarashadda Puntland oo kormeer ballaran ku sameysay xarumaha waxbarashadda Gobalka Mudug, safarkaas oo qaatey 4 maalmood 27th ilaa 30th bisha October 2012.